Apple waxay ku dhawaaqi doontaa natiijooyinkeeda maaliyadeed Febraayo 1 | Waxaan ka socdaa mac
Waa waqtigii la arki lahaa tirakoobka iibka Apple ee rubuca afaraad. Shirkadda Californian ayaa maanta soo warisay taariikhda saxda ah ee ay sii deyn doonto natiijooyinka maaliyadeed rubacii koowaad ee sanad maaliyadeedka 2018, oo u dhiganta bilihii ugu dambeeyay ee sanadkii hore.
Taariikhda la doortay waxay noqon doontaa Febraayo 1, waxaana loo qorsheeyay 14.00:XNUMX duhurnimo, sida shirkadda Waqooyiga Ameerika ay saacado yar uun ka hor ugu dhawaaqday maalgashadeyaasheeda bogga rasmiga ah.
Shirkan, waxaan ku ogaan doonnaa markii ugu horreysay xogta ugu horreysa ee iibka iyo natiijooyinka saamiga suuqa ee alaabada cusub ee shirkadda, iPhone X, iyo sidoo kale inta ka hartay alaabada iyo adeegyada shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino. Tirakoobyadan waxaa si weyn u rajeynaya qayb weyn oo ka mid ah macaamiisha Apple, kuwaas oo doonaya inay ogaadaan sida wanaagsan ee loo helay alaabooyinka cusub ee la bilaabay sanadkii hore. Sidaan ognahay, Apple waxay qatar badan gashay sanadkan marka loo eego wareegyadii hore, sida muuqatana ciyaarta ayaa sifiican u dhacday. Waan arki doonaa waxa tirooyinka ugu dambeeya ay sheegaan.
Sidoo kale, Apple waxay shaacisay goobta lagu qabanayo Shirka Sannadlaha ah ee Saamilayda 2018, oo loo qorsheeyay Febraayo 13, wuxuu ku yaal tiyaatarka cusub ee Steve Jobs, oo ku yaal Apple Park. Goobtan gaarka ah iyo astaamaha ayaa dhowaan la daahfuray inta lagu gudajiray Khudbadda Bishii Sebtember ee la soo dhaafay, halkaas oo lagu soo bandhigay alaabtii ugu dambeysay ee tufaaxa.
Dhacdadan soo socota, codsi ayaa la filayaa tiro aad u tiro badan oo saamileyaal ah oo ku saabsan gargaarkaaga, sidaa darteed runtii way adkaan kartaa in si doorbid ah loo helo kulankan, xitaa saamileyda waaweyn ee shirkadda tikniyoolajiyadda.
Haddii aad ka mid tahay ama aad xiisaynayso faahfaahin kale oo ku saabsan mawduucan, waad arki kartaa dhammaan macluumaadka ku yaal bogga rasmiga ah ee Apple maalgashadayaasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay ku dhawaaqi doontaa natiijooyinkeeda maaliyadeed Febraayo 1